« Tsy nahazo niteny indray i Andry Rajoelina tany Turquie hoy i Manoela »-09 mey 11 – MyDago.com aime Madagascar
Toerana iray mahasarika olona isan’andro i Magro Behoririka, tsy andeha hiantsena na hiala voly, na sanatria mandany andro akory fa fandraisana anjara amin’ny tolona ho an’ny firenena .Ho anao tsy afaka namonjy ny kianja, na koa té hahalala vaovao dia indro fintininay aminao izany :
Dillon jeune TIM : ny minisitry ny mponina ao anatin’ny FAT mihitsy no mahatsapa fa miisa arivo ny olona mivarotra amoron-dalana ary 81% ny malagasy no tsy an’asa, izany anefa dia vokatry ny nataony ihany. Samy mahatsapa isika hatramin’izao fa tsy misy vahaolana hafa ankoatra ny fialan’i Andry Rajoelina koa hanao rodobe ho any Andranomena aloha isika amin’ny 12 may hoy izy.
Donné avy any Avaratra : mivoaka miditra eto an-tanindrazana ny FAT. Ary alohan’ny handehanany amin’ny toerana iray matetika dia mandalo ao amin’ny reny malala aloha maka hevitra, tsy misy vokatra azo tsapain-tanana anefa izany roa taona aty aorina koa ny miala no mety aminy hoy I Donné.
Zafimbelo (Ankolafy Zafy) : ny vahaolana hita mahomby aloha hatramin’izao mba hivoahana amin’ny krizy dia ny fialan’i Rajoelina ihany.Ary ny rodobe no hafahafantsika nanantanteraka izany. Avy eo vao miroso amin’ny fampihavanana ka « indemniser-”n’ny fanjakana ireo tratrin’ny voina tamin’ny 2001 sy 2009 , avy eo vao miroso amin’ny fifidianana malala, andraisan’ny daholobe anjara ary eken’ny rehetra ny vokatr’izany. Ny CRN koa tokony mamolavola lalam-panorenana vaovao hoy izy.
Rodolphe (plate forme): tapitra ny fotoana ho an’ny fampanantenana pokaty, any amin’ny tia tanindrazana sisa ny fanantenana. Tsy maintsy tratra ny tanjona dia ny fiverenan’i filoha Ravalomanana. Anjaran’ny vahoaka no maneho ny safidiny fa ny vahaolana dia ny fiverenan’i Dada sy ny fialan’i Rajoelina ihany no tanjona hoy Rodolphe.
Georges : fahombiazana ny hetsika omaly nokarakarain’ny KMFB firaisana fahaefatra ary nanotrona tany ny profesora Zafy Albert.
Malagasy tia an’i Madagasikara no hirodorodo ho any Andranomena amin’ny faha 12 mey hoy i Georges. Mila mapiseho isika fa makasikatra ny zavatra ataon’ny be kintana satria dia efa in-droa izy ireo no nilaza fa tsy mila FAT mitondra an’i Madagasikara ary manana zo tsy azo ivalozana na droit de veto ny Amerikana amin’izany hoy izy.
Manina tokoa moa isika no mitaky ny fiverenan’i Dada ? Satria dia izy irery aloha no “crédible” eran’izao tontolo izao ary afaka manovotra an’i Madagasikara ao anatin’ny fotoana fohy.
Ignace : ny rodobe dia mila mafana ary miara-mandroso fa tsy mitsaitsaika. Manomboaka io 12 mey io no fanalana an’i Andry Rajoelina.
Mitotototo eran’ny izao tontolo izao ny FAT, mivoaka lava fa tamin’ny ity vao hoe “première réunion officielle” ary ny voalohany dia “rencontre des pays les moins avancés” izany hoe firenena mahantra indrindra, fa iza tokoa moa no nampahantra an’ny Madagasikara tsy ny Fat ihany?
Tsy ekena ny » monopole »-n’ny Magro sy Tiko amin’ny PPN nefa nisy ihany ny vokatra hafa teto fa ny vidiny lafo kokoa. Amin’ny izao fotoana dia ny ITA no manao ampihimamba ny menaka ka 6000 ariary ny litatra tsy misy miteny ary raha namidy ny « air force I sy II » dia 6 kapoaka isan’olona no azon’ny tsirairay, ampy ve izany nefa dia nampitehaka vahoaka teo amin’ny 13 mey? I Sareraka aza tamin’ny ireny dia niteny fa fanandevozana ny miasa amin’ny zone franche, tsy andevo intsony ve ianareo ankehitriny, nety taminareo ve ilay fanovana?
Manoela : « tsy nahazo niteny indray i Andry tany Turquie » hoy i Manoela.
Mifona amin’ny Dada izay fa mahare fa hisy hosamborina indray : hamaly izahay. Matahotra ianareo fa hanao rodobe izahay dia hampitahorina. Ho rodobe io amin’ny 12 Mey io hamangiana ny firenena mantanjaka indrindra eran-tany.
Jeanson : fombafomba ihany ny manatitra taratasy sy misaotra satria tsy afaka makany fotsiny isika amin’ny 12 mey. Raha nitsena an’i Dada isika an-tapitrisa ka hanao rodobe hivoahana amin’ny krizy ve ho latsaka izany ?
Mektoub : Vanimpotoana « critique » izao fa ny « résultat » efa fantatra ihany. Aferan’ ny malagasy TiaTanindrazana ity fa tsy aferan’i Zafy ary ny masoivoho dia efa niteny fa ny ankolafy telo tamin’izany dia kanosa satria efa tsy nekeny hatrany io FAT io. Ity antsika ity izany no ara-dalana ary ny raharaham-pirenena dia ambony noho ny olona tsirairay. Adidintsika no mamerina ny safiditsika fa ny FAT tsy hamerina an’i Dada eto mihitsy.
Malok’ila ny fiainan’i Andry Rajoelina !
Ho any ambany atsinana ve i Andry Rajoelina?
Auteur Solo Razafy*Publié le 9 mai 2011 9 mai 2011 Catégories Politique
6 pensées sur “« Tsy nahazo niteny indray i Andry Rajoelina tany Turquie hoy i Manoela »-09 mey 11”
Le navire de transport Français « Le Kiara » a quitté Vohémar hier avec 12 containers de bois de rose à son bord. Destination, la Chine
FeoIray dit :
9 mai 2011 à 22 h 40 min
Demandons Mr Alain Juppé, sur son blog de de ne pas recevoir le sans-qualité tgv,
10 mai 2011 à 8 h 38 min
Andry Rajoelina : tapis rouge à Istanbul
11 mai 2011 à 7 h 41 min
Na tapis rouge na tapis noir, turquie tsy izao tontolo izao tsy akory. Raha mazana ingahy dj, aoka izy hambabo ny be kintana.
fa be kintana zao tontolo izao
14 mai 2011 à 19 h 17 min
tapis ou nonb :Rajoelina a surtout fait…le tapis …ignoré par le S.G. de l’ONU !
le lapin a tapissé le mur , la tête basse.
Précédent Article précédent : VIDEO ITW Fetison R. 09 mai 11
Suivant Article suivant : VIDEOS kabary Magro 09 mey 11